Azerbaijàna : Trano Filalaovana Tantara an-Tsehatra Mpisava Làlana Manome Sehatra ho An’ireo Mpiantsehatra Manana Fahasembanana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Oktobra 2017 5:10 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Ελληνικά, عربي, Español, srpski, Nederlands, Português, Italiano, Français, македонски, 繁體中文, English
Fampisehoana iray tao amin'ny ƏSA, trano filalaovana tantara an-tsehatra voalohany any Azerbaijàna natao hamoriana ireo mpilalao tantara an-tsehatra na manana fahasembanana na tsia. Sary avy amin'i Famil Mahmudbeyli.
Ity manaraka ity dia lahatsoratra fiaraha-miasa avy amin'ny EurasiaNet.org nosoratan'i Durna Safarova. Navoaka indray rehefa nahazoana alàlana.
“Aza menatra ny tenanao. Aza saro-kenatra noho ny amin'ny vatanao, na ahoana na ahoana bikany,” hoy ilay lehilahy, eo am-panalàna ny lobany nandritra ny fanarahan'ny mpijery maso azy, ravo.
Ilay lehilahy eo an-tsehatra, mpanao hosodoko sy marary saina, no iray amin'ireo endrika lalaovina an-tsehatra amin'ny DUMB, tantara an-tsehatra psikôlôjika naseho tao amin'ny ƏSA ( “tapa-kazo mandeha” amin'ny fiteny azerbaijan), trano filalaovana tantara an-tsehatra voalohany natao hanangonana ireo mpiantsehatra na manana fahasembana na tsia any Azerbaijàna.
Sahala ny any amin'ny toerana maro, dia tojo ny fiheverana mahazatra sy fiheverana fa miankin-doha, tsy mahavita zavatra, ary tsy sambatra ny olona manana fahasembanana. Nolazain'ny mpamorona ny ƏSA fa noforoniny ilay trano filalaovana tantara an-tsehatra – ilay voalohany amin'io karazana io any Kaokazy – mba hiadiana amin'ireny hevitra diso ireny.
“Tsy tetikasa sosialy izany, tsy fialàmboly, miasa amin'ny fomba matihanina izahay,” hoy i Gulamzade tamin'ny EurasiaNet.org.
Tena mpilalao an-tsehatra, mpilalao mozika sady mpaka sary i Gulamzade, ary tsy manana fahasembanana. Notantarainy fa tao anatin'ny fahakiviana lalina no nahatongavan'ny aingam-panahy tao aminy. Nandinika ny famonoantena izy, hoy izy, nefa alaivo sary an-tsaina inona no niseho raha tsy nahomby ny andrana nataony. “Hiaina toy ny olona manana fahasembana mandra-pahafatiko aho ary tsy afaka hihetsika” hoy izy nieritreritra.
DUMB, izay nivoaka tamin'ny Septambra lasa teo no voaloham-bokatry ny ƏSA. Naseho an-tsehatra tao amin'io toerana filalaovana tantara an-tsehatra io ihany koa Ilay Nofy Alina Anaty Fahavaratra novokarin'i Shakespeare izay novatsian'ny masoivoho britanika any Azerbaijàna tamin'ny ampahany ka lafo avokoa ny toerana rehetra 370. “Raha manana trano misy toerana 10.000 izahay, dia heveriko fa mety ho feno izany,” hoy i Gulamzade.
Tsy noho ny zava-baovao entin'ireo mpilalao an-tsehatra manana fahasembana ihany no fahombiazan'ilay trano filalaovana tantara an-tsehatra, fa ny fomba nentina namoronana ilay sehatra ihany koa, hoy i Gulamzade : “Tsy ampy loko ny sehatr'ilay trano filalaovana tantara an-tsehatra any Azerbaijàna. Noezahanay ny hampiaina azy ary nety izany.”
Telo ihany no toerana iombonana tsy miankina filalaovana tantara an-tsehatra tany Bakò talohan'ny nisokafan'ny ƏSA. Fanampiny nahatsara ny fiainana ara-kolontsaina ao an-tanàna ny fisian'ilay vondrona vaovao, hoy i Aliya Dadashova, mpitsikera lalao an-tsehatra ao an-toerana. ” Tsy dia niaina loatra tahaka ny tamin'ny fiandohan'ny taona 1990 ny seho an-tsehatra fony ireo andianà seho an-tsehatra madinika maro no nisy,” hoy izy tamin'ny EurasiaNet.org. ” Tsy nisy fiantraikany ara-tsosialy sy ara-kolontsaina ny trano filalaovana tantara an-tsehatry ny fanjakana, noho izany dia mahafa-po ny mahita hetsika vaovao” toa ny ƏSA.
“Angoninay ny olona avy amin'ny vondrona sosialy samy hafa. Mety ho hitanao mijery anay ireo manan-kaja ao amin'ny governemanta sy ireo fahavalony ara-politika. Misy ireo mpankafy ny tantara lalaovina an-tsehatra, ary voalohany amin'izany dia ny ao amin'ny ƏSA,” hoy ilay mpilalao Orkhan Adigozel nanampy. Malemy vokatry ny loza nahazo azy sivy taona lasa i Adigozel, ary ƏSA no nanaovany lalao tantara an-tsehatra voalohany.
“Mpilalao ihany izahay rehefa eny an-tsehatra,” hoy i Adigozel . “Miezaka misintona ny sain'ny mpijery hifantoka amin'ny lalao izahay, fa tsy amin'ny maha-olona manana fahasembanana. Fiheverana mahazatra ny olona ny hoe tsy afaka manao na inona na inona ny olona manana fahasembanana. Vakianay izany hevitra mahazatra izany ary miezaka izahay mampiseho fa tsy misy sakana ny kanto.”
15 no isan'ny mpikambana ao amin'ny ekipa, ary ahitana ireo karazana fahasembanana. Ny sasany sahirana ara-pihetsehana noho ny tsy fahatomombanan'ny atidoha, ny iray tapa-tongotra, ny hafa voan'ny Syndrome de Down. Ary noho ny asan'ny mpandika teny amin'ny alàlan'ny famantarana, na dia ny marenina aza dia afaka mahazo ilay fampisehoana.
Feno sakana, nandritra ny fotoana ela, ny fiainan'ireo olona manana fahasembanana any Azerbaijàna, na dia miova tsikelikely aza izany. Tamin'ny 2015, naorin'ny governemanta ny tranobe misy rihana 12 ahitàna trano fonenana 132 ho an'ny olona tsy mahita tsara . Nolanian'ny governemanta ihany koa ny lalàna manome fitaterana sahaza, trano, fitsaboana ary fanarenana ho an'ny olona manana fahasembanana. Mitàntana foibe fanarenana miisa 16 ny governemanta, saingy lazain'ireo mpiaro ireo olona manana fahasembanana fa tsy ampy hamaliana ireo fangatahana any Azerbaijan izany.
Olana manokana ny fitaterana, ho an'ireo mpilalao tantara an-tsehatry ny ƏSA. Ny làlana, ny fiara fitateram-bahoaka ary ny fiarakaretsaka dia tsy natao loatra ho an'ny seza misy kodiarana natao ho an'ny olona misy fahasembanana ; ny hany fiarakaretsaka mety amin'ny seza misy kodiarana ho an'ny olona manana fahasembanana ampiasain'ny governemanta dia ny an'ny Baku Taxi Company, fantatra amin'ny lokony volomparasy, sy ny endriny tahaka ny fiarakaretsaka any Londona. Saingy 20 manats ( eo ho eo amin'ny 12 dolara) ny fitaterana indray mandeha. Lany amin'ny fiarakaretsaka ny antsasaky ny tetibolan'ny famokarana tantara an-tsehatra, hoy i Gulumzade. “Raha toa ka mandoa 20 manats ny mpilalao tantara an-tsehatra iray mandeha amin'ny seza misy kodiarana ary fara-fahakeliny in-30 izy no mamonjy famerenana, jereo amin'izany ny vidin'ny fitaterana ho an'ny olona iray, ” hoy izy.
Takian'ny lalàna any Azerbaijan ny fisian'ny mpiasa manana fahasembanana fara-faharatsiny telo isan-jaton'ny mpiasa any amin'ny orinasam-panjakana, nefa zara raha mihatra izany. Amin'ny ankapobeny, 5,6 isan-jaton'ny vahoaka 540.000 manana fahasembanana any Azerbaijan ihany no miasa.
Gulnar Alfidatli, 23 taona, mpilalao tantara an-tsehatra, dia sahirana ara-pihetsehana. Manana maripahaizana momba ny fitantanambola izy ary niasa tao aminà orinasa tsy miankina iray, saingy voaroaka rehefa fantatr'ilay lehibeny fa manana fahasembanana,” hoy izy. Tsaroany ny fampisehoana voalohany nataony, izay nahazoana tehaka mirefodrefotra. “Sahala amin'ny hoe any amin'ny nofy majika izahay,” hoy izy.
Zeorzia 14 ora izay